Inbound Kushambadzira Kukwira | Martech Zone
The folks at Pamorama ndaita basa rinotyisa neizvi infographic izvo zvinopa ruzivo rwekuti nei kushambadzira kuri mukati iri iro zano rakanakisa kusiyana nekutengesa kunze ... kubva pamaonero evatengi.
Sezvo vatengi vachiramba vachidirana kuenda kuInternet, indasitiri yekushambadzira yeInternet iri kuramba ichichinja. Munzira mbiri-senge seInternet, echinyakare mamodheru ekushambadzira ari kurasikirwa nehunobudirira, uye mhando nyowani dzekushambadzira dziri kuwana huni nekupa kukosha kwevatengi kuri kuwedzera kubviswa nemaitiro ekupokana ekutengesa.
Nepo kuyedza kwakawanda kuchida kuzvipira uye nguva yekumhanyisa, hapana imwe nzira inodhura yekuwana vatengi vakakura vanotenga chigadzirwa chako kana sevhisi.
Tags: inbound MarketingKushambadzira Infographicskushambadzira kunzeunbounce
Jul 5, 2012 na8: 28 PM
Ichi chikuru infographic. Ini ndinobvumirana newe chose pawataura izvozvo
ruzivo rwunowanikwa nyore nyore kune vatengi izvozvi runogona kubuda
kushambadzira kunoenderera nekuderera kunoramba kuripo. Inbound
kushambadzira kungave kwakaipa kune vamwe, asi zvirokwazvo kuri kupa simba vatengi.